मंगलबार, भदौ १, २०७८ NB Media Network
पूर्व निर्धारित चिसापानी,बर्दिया भ्रमणको स्थगन पश्चात् श्री राम जानकी तथा सिद्धनाथ बैजनाथ मन्दिर संरक्षण समितिद्वारा आयोजित होली सम्बन्धी अन्तरक्रिया एवं मन्दिर हाता भित्र होली खेल्ने कार्यक्रम चलिरहेको थियो । बेलुका पख फोन आउँदा भोलि(२०७७÷१२÷१५ गते) नैनीताल भ्रमणको कार्यक्रम फिक्स भएको जानकारी प्राप्त भयो । आफ्नो तर्फबाट आवश्यक तयारीको खासै व्यवस्थापन नभए पनि बिहान भ्रमण टोलीका सदस्य सित सम्पर्क गर्दा सहभागीको सङ्ख्या अलिक बढी भएमा झन् रमाइलो हुने विचार व्यक्त भयो ।
मैले आफ्नो २ जना साथीसित सम्पर्क गर्दा उहाँहरू जाने निश्चिततामा पुग्नु भयो ।यति गर्दा बिहानको १०ः०० बजिसकेको थियो । बाह्र बजेको गेटमा बनबासा पुल क्रस गरिसक्नुपर्छ भन्ने जानकारी सँगै हतारमै सम्पूर्ण तयारीहरू भए । स्नानसँगै भोजन पश्चात् द्रुत गतिमा नेपाल भारत सीमा नाका गड्डाचौकी पुगियो । दशगजा क्षेत्रमा इनोभा कम्पनीको यु.के. ०७ जे ए ४१४५ नम्बरको जिप खडा थियो । २ जना साथी सँगै म सहित ३ जनालाई देख्दा जिपबाट इशारा प्राप्त भयो कि —हामी यता छौँ भनेर ।
तत्पश्चात् जिप पार्किङ स्थलबाट बिस्तारै नेपाल भारत सीमामा भारतद्वारा निर्मित नयाँ गेट तिर प्रस्थान गर्‍यो र अभिवादनसहित हामी समेत जिप भित्र हानियौँ । अलिक अगाडी भारतीय सशस्त्र सीमा बलको चेकजाँच पश्चात् अङ्ग्रेज समयमा निर्मित बनबासाको शारदा पुल हुँदै अगाडी बढ्यौँ । करिब वर्ष दिन पश्चातको भारत यात्राले छुट्टै अनुभवको अनुभूति भइरहेको थियो । बनबासा बजारमा भ्रमण समयमा चाहिने खर्चको शेयर पश्चात् हामी पानी किनी भा.रु. सटही गरी भारतीय राष्ट्रिय राजमार्ग प्राधिकरणको राजमार्ग हुँदै नैनीताललाई पछ्याइ रह्यौँ ।
जिप सँगै मन्द गतिमा सडकमा हिन्दी गीतहरू पनि कुदिरहेका थिए । होलीको समेत समय भएकाले मानिसका अनुहारहरू समेत रङ्गिन थिए । खटिमा चौराहाबाट दायाँतर्फ लागि नानक मत्ता हुँदै सितार गन्ज तर्फ अगाडी बढ्यौँ । सितार गन्ज चौराहाबाट समेत दायाँ मोडिकन हामी चोर गलिया हुँदै अगाडी बढिरहेका थियौँ ।साथीहरूका भ्रमणका सम्बन्धमा विविध विचारहरू आइरहेको थिए । उपयुक्त समयमा पर्यटकीय गन्तव्य थाइलेण्ड जाने विषयमा समेत चर्चा भइरहेको थियो । काठ गोदाममा भारतीय रिजर्भ पुलिसको ठुलो दस्ता रहेछ ,सयौँ बिघा जमिनमा फैलिएको ।
काठ गोदाम पश्चात् भुजीयाघाटमा आलुपराठाको नास्ता पछि हामी ज्युलीकोटलाई पछ्याइ रह्यौँ ।भ्रमण टोलीका नेता इन्जिनियर साब र व्यवस्थापक(मेनेजर) सब इन्जिनियर साबले व्यवस्थापनमा कुनै कसर बाँकी राखेका थिएनन् । काठ गोदामबाट सुरु हुने पहाडी इलाकाको मनोरम दृश्यहरू मोबाइलमा समेत कैद हुँदै थिए । विभिन्न स्थानको दुरी बताउने हरियो कलरको बोर्डले नैनीतालको दुरीलाई प्रष्टताका साथ बताइरहेको थियो ।पहाडी इलाका गाडी छिनछिनमा घुम्ने भएकाले पाचन प्रणालीमा समेत असहजताको अवस्था सिर्जना भइरहेको थियो ।
तराइ र पहाडको बाटो छिचोल्दै करिब ४ बजे हामी नैनीताल क्षेत्र पुग्यौँ । चारैतिर बजार,बिचमा सुन्दर मोहक तालले सबैको मनलाई मोहित बनाइरहेको थियो । रात्रिकालीन बसाइका लागि हामी होटेल सुरामा गयौँ,जुन नैनीताल जु रोडमा अवस्थित छ । बैतडी ,बझाङकै झल्को दिने नभए पनि अग्ला पहाड त नैनीतालमा पनि पर्याप्त छन् । सर्वप्रथम होटेलमा कोठाको तय भए पश्चात् झोला लगायतका सामग्री राखी ७ सदस्यीय भ्रमण टोली नैनीताल सँग साक्षात्कार गर्न निस्कियो । पहाडी क्षेत्र ,व्यवस्थित विकास,उल्लेख्य मानिसको उपस्थिति,चिसो मौसम,अलिक महँगी सायद नैनीतालका विशेषता हुन ।
नैनीतालसित व्यक्तिगत र सामूहिक फोटोहरूको कैद पश्चात् हामी तालको प्रत्यक्ष साक्षात्कार सँगै बोटिङको लागि डुङ्गामा बस्यौँ । २ डुङ्गामा ४ जना,१ डुङ्गामा ३ जना गरी जम्मा ७ जना ३ किस्तीमा बोरिङमा फोटो सँगै भिडियो,तालको पानी उछिट्ट्याउने,डुङ्गा खियाउने मानिस सँगको अन्तर्क्रिया जस्ता कुराले मनोरमता प्रदत्त गरिरहेको थियो । डुङ्गा खियाउने नाविकका अनुसार अङ्ग्रेजको समयबाटै रहेको यो ताल १.५ कि.मी.लामो तथा ४० मि. गहिरो छ । प्राकृतिक आनन्द लिन विदेश सँगै भारतका विभिन्न प्रान्तबाट हजारौँ मानिसहरू यहाँ आउने गर्दछन् ।
ताल बोटिङ पश्चात् सामूहिक फोटो सँगै पैदलै हामी अगाडी बढ्यौँ । मस्जिद सँगै गुरुद्वाराको अवलोकन एवं रातीको मनोरम दृश्यले मन प्रफुल्ल भई रहेको थियो । पहाडका टाकुराबाट लाइटको छाया तालभरि फिँजिएको दृश्य झन् लोभलाग्दो र चित्ताकर्षक थियो ।नैनिताल भूगोलको हिसाबले साह्रै ठुलो नभए पनि विशेषताका हिसाबले विशाल छ । नैनिताल अवस्थित भारतीय प्रान्त उत्तराखण्डका राज्य पालको गृष्म कालिन कार्यालय(राजभवन),उत्तराखण्डको उच्च अदालत, कुमाउँ विश्वविद्यालयको केन्द्रीय कार्यालय जस्ता विशालतम अड्डाहरू यहाँ छन् ।
२०७७÷१२÷१५ को नैनीतालसंगको प्रत्यक्ष साक्षात्कार ,बोटिङ,रात्रि कालिन मनोरम दृश्यावलोकनसँगै बेलुकी ७ः३० बजे होटेल सूर्या पुग्यौँ ।सबै भन्दा आवश्यक भइसकेको वायरलेस फिडालिटीमा आबद्ध भई सामाजिक सञ्जालका जालहरूभित्र घुस्न थाल्यौँ । गफगाफसँगै सामूहिक भोजन गर्‍यौँ ।कुनै पनि व्यवस्थापकीय सहजताका लागि २० नम्बरमा मा कल गर्न सकिने लण्ड लाइन टेलिफोन राखिएको थियो । पुरै कोठा भरी खैरो रङको वाल ,टायल एवं सेतो रङको फ्लोर टायल ,अति व्यवस्थित कोठा,वाल टिभी ,ढिलो गरी चल्ने वाई फाइले अलिक नमज्जा समेत ल्याइरहेको थियो ।
रात्रि कालिन प्रहर व्यतीत पश्चात् बिहान ५ बजे नै हामी उठ्यौँ ।नित्य कर्म सीतै अलिक छिटो फ्रेस हुनुपर्ने थियो किनकि हामीले ७ बजेदेखि नै नैनितालका अन्य मोहक स्थल हेर्नेगरि जिपसँग कन्टेक्ट गरेका थियौँ । युके०४ टि ए९३५४ नम्बरको जिपमा बिहान सुरुमा हिमालय दर्शनका लागि करिब २३१० मि.को उचाइमा प्रस्थान गर्‍यौ । कुहिरोले खासै हिमालयको दर्शन गर्न नपाइए पनि फोटोमा आफूलाई कैदसँगै त्यहाँको प्रकृतिसित प्रत्यक्ष अन्तरक्रिया गर्‍यौ । तत्पश्चात् हामी तल ओरालो हुँदै लवर्स पाइन्ट पुग्यौँ ।
खासै मोहक कुनै संरचना नभए पनि निश्चित ठाउँलाई पोइन्टको नाम दिई पर्यटक लोभ्याउने प्रयत्न गरिएको थियो । त्यहीँबाट हर्स राइडिङको व्यवस्था रहेको थियो । ५ कि.मी उकालो घोडा चढाइको भारु.८१० ।थेग्नै नसकिने महँगाइ !त्यहाँबाट हामी सुसाइड पाेइन्ट पुग्यौँ । त्यहां पनि खासै अवलोकनका संरचना थिएनन् । भिरालो पहाड मात्रै । पहिलेको समयमा जीवनबाट विरक्त मानिसहरू त्यही लवर्स पोइन्टको भिरबाट हाम फाली आत्म हत्या गर्ने भएकाले उक्त ठाउँको नाम सुसाइड पोइन्ट रहन गएको कुरा घुमाउन आएका गाइडले बताइरहेका थिए । तत्पश्चात् हामी सरिता ताल हुँदै खुर्पा ताल पुग्यौँ ।
खुर्पा तालमा आलु पराठाको नास्ताको आनन्द पश्चात् त्यहाँका प्राकृतिक छटाहरूको मनोरमता ग्रहणसँगै पुनः नैनीतालका लागि फिर्ता भयौँ । नैनीतालबाट करिब ८÷१० कि.मी टाढा एवं पहाडी बाटो भएकाले नैनीताल पुग्न अलिक समय लागिरहेको थियो । एनसीसी को ठुलो ट्रेनिङ सेन्टर समेत रहेछ नैनीतालमा । नैनीतालमा नैनीताल बैङ्क लिमिटेडको केन्द्रीय कार्यालय हुँदै हामी फेरी राती बसेको होटेल नजिक पुग्यौँ । फिर्तीका लागि जिप त्यहीँ पार्किङ थियो । होटेलबाट त बिहान ७ बजे नै हामी चेक आउट भइसकेका थियौँ । तत्पश्चात् सबै जना ऊर्जा क्षीण भएझैँ गरी जिपमा हानियौँ ।
जाने बेला र आउने बेलाको ऊर्जामा दिनरातको अन्तर भइसकेको थियो । उपयुक्त समयमा पुनः आउने प्रसङ्ग उद्धृत गर्दै नैनीताल सँगै बिदा माग्यौँ र बनबासाका लागि प्रस्थान गर्‍यौ । होलीको अन्तिम दिन भएकाले नैनीताल लगायतको क्षेत्रमा मानिसहरू होली खेल्ने ,रङ्ग छाप्ने कार्यमा व्यस्त थिए । आम मानिसहरू होली खेलिरहँदा आफूलाई पनि होली खेलौँ खेलौँ लागिरहेको थियो, यी सबै जिपमा बसी मनमा खेलिरहेका लहर थिए । पहाडको बाटो ,नेपाली,कुमाउनी गीतको आनन्दले कटाइरहेका थियौ ।
नैनीताल प्रस्थान गर्दाका समयमा पछ्याइरहेका स्थानको पुनरावृत्तिसँगै बनबासा शारदा पुल पुग्यौँ । दिउसोको १२ बजे गेट बन्द भइसकेकाले शारदा पुलमा पैदल यात्रा गर्दै शान्त शारदा नदीको आनन्द लिँदै कस्टम कार्यालय,एसएसबी चेक पाइन्ट हुँदै गड्डाचौकी पुग्यौँ । होलीको दिन भएकाले प्रायः इलाका सुनसान थिए । अटो रिक्सा र बाइक हुँदै सबै जना सकुशल घरतर्फ फर्कियौँ ।
भ्रमण टोलीका सदस्यहरू :
१. पवन सिंह विष्ट (टोली नेता)
२.नरेन्द्र बहादुर चन्द (व्यवस्थापक)
३.अमित प्रसाद भट्ट
४.केशव राज पन्त
५. राजेन्द्र सिंह गोयला
७.विमल प्रसाद ओझा
- अमित प्रसाद भट्ट (दोगडाकेदार गाउँपालिका ४ पिपलकोट, बैतडी)
हाल : भीमदत्त नगरपालिका ७ हल्दुखाल, राम मन्दिर टोल,कञ्चनपुर ।
मोबाइल नम्बर ः ९८४८७४४५३५
प्रकाशित मिति: मंगलबार, भदौ १, २०७८, १५:०१:००